RASMI: Trent Alexander-Arnold Oo Abaal Marinta Da'yarka Sanadka Ugu Fiican Ku Garaacay Rashford, Christian Pulisic, Martial, Greenwood Iyo Xidigo Badan Oo Kale. - Gool24.Net
RASMI: Trent Alexander-Arnold Oo Abaal Marinta Da’yarka Sanadka Ugu Fiican Ku Garaacay Rashford, Christian Pulisic, Martial, Greenwood Iyo Xidigo Badan Oo Kale.
Maamulka Premier League ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in difaaca midig ee kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold uu ku guulaysatay abaal marinta xidigii da’yarka ee sanadka Premeir League ugu fiicnaa.
Trent Alexander-Arnold ayaa soo qaatay xili ciyaareed aan la rumaysan karin wuxuuna abaal marinta da’yarkii ugu fiicnaa Premier league ku garaacay xidigo da’ahaan ka wayn isla markaana khibrad ahaan garoomada ugaga soo horeeyay.
Trent Alexander-Arnold waxa uu abaal marintan ku garaacay 7 ciyaartoy oo hore ugula jiray liiskii musharixiinta abaal marinta da’yarkii xili ciyaareedka Premeir League ugu fiicnaa.
Ciyaartoyda uu Arnold abaal marintan kaga guulaystay ayaa kala ah Christian Pulisic, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Mount, Mason Greenwood, Dean Henderson iyo Jack Grealish kuwaas oo dhamaantood xili ciyaareed fiican soo qaatay balse uu xidiga reer England ee Arnold uu abaal marintan ku garaacay.
Trent Alexander-Arnold ayaa markii ugu horaysay ku guulaysatay abaal marinta labaad ee horyaalka Premier Leauge ugu saraysa ee Premier League Young Player of the Year kadib markii uu dhigay rekoodh kale oo gool caawinta Premier League ee difaacyada u khaas ah.
Trent Alexander–Arnold waxa uu xili ciyaareedkan soo dhigay rekoodhkii abid ugu sareeyay ee uu difaac ku sameeyay gool caawintii ugu badnayd ee Premeir league kadib markii uu sameeyay 13 gool caawin.
Laakiin arinta kale ee layaabka leh ee uu Trent Alexander–Arnold soo sameeyay ayaa ah in uu noqday ciyaartoygii shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ka soo sameeyay kubbadihii ugu badnaa ee xerada ganaaxa la soo galiyay wuxuuna sameeyay 509 kubbadood oo uu xeradaganaaxa soo dhigay.
Trent Alexander–Arnold waxa uu Liverpool ku soo biiray isaga oo 6 sano jir ah, waxa uu kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad saftay waqti uu Klopp baahi badan qabay ee kulankii Old Trafford markaas oo uu ahaa 18 sano jir kaliya.
Waxa uu Champions League kula guulaystay kooxdiisa Liverpool isaga oo 20 sano jir ah waxa uu markale ka caawiyay in ay koobka Premeir League ku guulaystaan kaas oo ay ugu danbaysay isaga oo aan xataa jirinba.
Si kastaba ha ahaatee, Trent Alexander–Arnold oo wali 21 sano jir ah ayaa la aaminsan yahay in aanu wali gaadhin heerkiisii ugu fiicnaa maadaama oo uu wali yahay ciyaartoy da’yar ah.
Ciyaartoyda iyo Da’dooda Ee Xidigaha Uu Arnold Abaal Marintan Ku Garaacay